Q1: ibekwe phi inkampani yakho?
A: inkampani yethu ibekwe e Xi'an, kwiPhondo Shaanxi, China.
Q2: Ngaba zinika isampuli kuthi?
A: Ewe, Sinako ukuthumela iisampuli simahla, kodwa umxhasi kufuneka ahlawule eJozi.
Q3: Yintoni ubuncinane ubungakanani lakho ukuze?
A: Le ubungakanani order Ubuncinane yi-5000 square imitha, kodwa ke ayixoxisi.
Q4: Yintoni na imiqathango intlawulo yakho?
Q5: Yintoni na ixesha wophathelo?
A: Ixesha Production ngokuqhelekileyo kubiza iintsuku 3-5, ukukwazi imveliso: square 5000-7000 metre nganye ngemini.
inkqubo yokucoca amanzi RO
Ziziphi iindidi imithombo yamanzi ntoni ngayo?
Reverse kucocwa i isisombululo unyango amanzi efanelekileyo iintlobo ezininzi amanzi water.tap, okwabizwa ngokuba kwimithombo kamasipala, undergroundwater, ezibandakanya amanzi amtyuba, kunye ndifuze. Umahluko omkhulu phakathi kwezi ntlobo kathathu umxholo ewonke eziqinileyo (TDS) lohlobo ngalunye. Njengomgaqo komnwe, i-American Health Association ifuna ukuba amanzi okusela phantsi TDS.Reverse 2,000 PPM kucocwa isoloko isetyenziswa kwimeko-bume amanzi etephini ukunciphisa yokuqaqadeka, okanye lowo doti efakwe emanzini abajikelezayo kwimibhobho yesinyithi. Iyonke eziqinileyo zichithakala isoloko ithagethi lokuhlanjululwa amanzi etephini ezigcina systems.Underground amanzi amanzi isoloko amtyuba, ithetha ukuba ziqulathe imiqulu emikhulu yetyuwa, kodwa akwanelanga ukuba ingqalelo amanzi amtyuba. Amanzi aphantsi komhlaba amaninzi nyulu kushishino kwezolimo, ishishini lemigodi. Amanzi aphantsi komhlaba kwakhona ithagethi saziswa kwishishini ezibhotileni le, kuba imixube kwezimbiwa ekhethekileyo badla ngokuba incasa enomtsalane.
Salt reverse kwamanzi kucocwa (ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba kwetyuwa) yi ekujikeni ndifuze emanzini okusela. Ocean amanzi ukuya ku-45,000 TDS PPM. Usetyenziswa kakhulu kwetyuwa kuza ekunikeni amanzi kwiindawo kuswela unikezelo rhoqo amanzi.
Ingaba pretreatment kuyimfuneko?
Kubaluleke kakhulu ukuba amanzi ukutya kufuneka preconditioned ukukhusela inwebu ukusuka ungcolisa ibangela ngaphambi kwexesha failure.The inwebu yakhiwe le material aneentunja elivumela ukuba amanzi ukuba kudlula, kodwa uyakugatya ukuya kwi 99% ye eziqinileyo ichithwe-sangqa kumphandle. Le iityuwa zichithakala bakwezolimo ukwala amanzi (anetyuwa umlambo), apho zikhutshwe kwenkunkuma. Ukususa izinto ngaphambi ngundoqo sivumele inkqubo RO ntoni oko kwakuthetha ukuba do.As i RO System iyaqhubeka ukusebenza, izinto eziqinileyo lichithakale laze lanqunyanyiswa emanzini feed badla ukuba yande ecaleni kumphezulu ndizayo. Ukuba ezi eziqinileyo bavumelekile ukuba ukunakha, bona ekugqibeleni kuthintelwe sicatshulwa kwamanzi ngomlomo inwebu, kwaba neziphumo zokulahlekekelwa of okugqiba. (The ezinomlinganiselo lweenwebu ngokuqhelekileyo obizwa ngokuba nezinga obhobhozayo, kwaye ulinganiswa iilitha unyawo sikwere indawo imifinya kumphezulu ngosuku nganye.)
Ingaba kuyimfuneko ukufumana uhlalutyo yamanzi?
A uhlalutyo lwekhemikhali oluneenkcukacha (lsi, SDI, okanye CFI) le-RO amanzi omxhesho ngqangi ukuba ikhombe foulants ezinokwenzeka. Oku kufuneka kubandakanye yokukala yobulukhuni (calcium nezinki), barium, kwiteksti, alkali, pH, kunye chlorine. I data evela uhlalutyo lwekhemikhali i ingasetyenziswa yi ezo njineli ukuyila inkqubo ukufumanisa elilelona
inwebu uluhlu eza ukunciphisa isiqhelo sokuba isikali kunye idipozithi ukubunjwa nkulu nokufunyanwa kunye nezinga ukubhobhoza.
Yintoni egqibayo ukuba pretreatments ngqo ukuba RO elithile?
Xa igama elinye: analysis. umthombo yonke amanzi ezahlukeneyo, kwaye awusoze ukwazi ukuba yintoni emanzini kwakho ude unayo zihlalutywe. Uhlalutyo amanzi, imilinganiselo lsi, SDI, okanye CFI zisetyenziswa ukugqiba iimfuno ngqo pretreatment ukuba ethile RO System. Ekubeni amanzi ziyahluka kakhulu ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, imfuneko pretreatment ngamnye uya kwahluka.
Ingaba amanzi feed kufuneka ukuthanjiswa yi-RO?
Ion unaniso indlela ethandwayo okuthambisa nokunciphisa amathuba ukuze isikali bezimbiwa uluhlu kumphezulu ndizayo. Ion ukuthamba exchange isebenzisa isodium endaweni ion scaleforming ezifana calcium, nemagnesium, barium, kwiteksti, intsimbi, aluminium ukuthintela umonakalo izinto ndizayo. Amaxwebhu sodium iityuwa ezinyibilikayo kakhulu, nto leyo zingafunwa lula yi Ebuyiselwayo kucocwa System kwaye wenze ngokulula zenze isikali izimbiwa phezu kobuso ndizayo. A mpahla sodiumcycle kukho kwakhona nge sodium chloride anetyuwa. Le regenerant lichithe, kunye mpahla siwabeka, kufuneka akhutshelwe kwenkunkuma. Kungenxa yoko ukuba exchange ion kucetyiswa ukuba izicelo ube imixholo metal eziphakamileyo emanzini ngayo.
Ingaba Inaliti asidi kuyimfuneko?
Kanye njengokuba izisombululo emuncu akalunganga imifinya, izisombululo abuhlungu umonakalo ukuba inwebu izinto ngokulinganayo. Inaliti Acid ukuze kudityaniswa inkqubo pretreatment RO ukulawula pH nokunciphisa utyekelo isikali-ukudalwa amanzi feed. Inaliti acid kuboniswa ukuba isikali oyinxalenye utyekelo esihlambo anetyuwa singaphezulu +0,3 njengoko kulinganiswa yi-lsi. Noba sulphuric okanye zehydrochloric acid ingasetyenziselwa le njongo.
Lenza ntoni i antiscalant?
Antiscalants abonise ukuba ngempumelelo ekudluliseleni amathuba phakathi cleanings lwemichiza inwebu RO. Ezi mveliso ke jikelele zavela ukuquka phosphate ezingaphiliyo, organophosphates, kunye dispersants. Ezinye Antiscalant ziqulathe Iipholima kakubi ityala kunye dispersants ezinokuthi xa kunye Iipholima cationic ukuze kugutyuleke up njengesihlambo phambi okucoca eendaba. I Antiscalant kufuneka isebenzisane nezi neeplastikhi; ngenye indlela, imveliso reaction uya niwagxobhe inwebu.
Yenza zonke iinkqubo zifuna ukucocwa chemical?
Phezu kwayo yonke imigudu yokukhusela inkqubo esuka ungcolisa ke ezilahlile wampompoza, ekugqibeleni inwebu ziya zifuna ukucocwa chemical. Inkqubo RO welldesigned ziya kubandakanya izibonelelo ukuba ukucoca skid ukuba kube lula inkqubo wokucoca. Le skid kufuneka ibandakanye kwitanki imichiza, umxube imbawula, impompo ojikelezayo, elindle, namathumbu, nazo zonke ezinye uqhagamshelwano kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze aphumeze i ukucoca yemichiza epheleleyo iimodyuli RO.